Fifamoivoizana No!, Fampiharana iray hahafantarana radara amn'ny arabe | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fampidirana GPS amin'ny telefaona finday dia ny fivezivezena, izay nanampy ny taham-data dia namela anay hahazo vaovao amin'ny fotoana tena izy eny an-dàlana sy ny zava-nitranga, ny tena mahaliana indrindra dia ny fampandrenesan'ny radara raikitra na finday.
2 Andininy hanatsarana
Mazava ho azy fa ny asan'ny kintana amin'ny fampiharana dia ny fampitandremana amin'ny radara. Tsia ny fifamoivoizana! Izy io dia manana tahiry Robser Premium, izay manome antoka fa havaozina izahay amin'ny lafiny fanaraha-maso haingana. Mazava ho azy, na dia ho an'ny mpampiasa mahazatra aza dia mety izany, mamporisika anao aho hameno ny làlana misy fampiharana hafa na serivisy fampitandremana eny amin'ny fiarahamonina (toa ny Waze na ny Social Drive) raha te hanana fampahalalana betsaka araka izay azo atao izahay
Ny fampitandremana amin'ny radara dia tsy mandeha afa-tsy amin'ny làlan'ny fitsangatsanganana, zavatra izay tsy misy ireo fampiharana fampitandremana radara hafa ary ankasitrahana. Hafa safidy mahaliana toy ny bitsika azo fehezina raha mandeha amin'ny hafainganam-pandeha marina, maodely marindrano, tena mpamaky hafainganam-pandeha miaraka amin'ny data GPS na fampandrenesana hampitandrina antsika amin'ny fakan'ny efijery.
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny rehetra dia ny manazava fa ny fampiharana dia manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy. Izany hoe mampitandrina antsika amin'ny radara eny an-dalana isika, manome antsika ny vidin'ny lasantsy, tatitra tranga ny fifamoivoizana mahazo angona avy amin'ny loharano marobe ary mamela antsika hijery ny fakantsary fifamoivoizana aza eny an-dalana. Saingy misy zavatra sasany tsy azo ovaina.
Ny antsipiriany lehibe tokony hatsaraina dia famolavolana. Na dia marina aza fa manara-dalàna izy amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo singa saika ampidirin'i Apple ao amin'ny Xcode, dia miharihary amin'ny fahitana azy voalohany fa tsy dia miasa tsara amin'ity rindrambaiko ity ny fampiharana. Ny sary masina dia tsy ampiasaina mifanaraka amin'izany (eo amin'ny laharana ambony amin'ny sarintany fifamoivoizana ny sasany fenoina ary ny hafa kosa tsy misy, ohatra), ny takelaka fampitandremana dia tsotra loatra ary amin'ny ankapobeny dia manome ny fiheverana fa ho tonga mora ampiasaina ny tarehy. mba hamenoana ny fihazakazahana.
Ny fahitana ny mpifaninana aminy dia tsy afaka mandry koa isika tanana mankamin'ny loha, satria ny safidy hafa ao amin'ilay sehatra dia mitovy na ratsy kokoa amin'ny lafiny interface ny mpampiasa. Nefa mitandrema, ny fiasan'ny fampiharana dia tsy marina ary ny famolavolana dia mbola voavaha amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy, koa raha mila misafidy ianao eo amin'ny fampiharana tsara tarehy izay tsy mandeha tsara sy ilay tsy dia tsara loatra izay mandeha tsara, ny mazava ny safidy faharoa. Ary apetraho ny mifidy fampitandremana radara, miaraka amin'ny zavatra niainako tsara indrindra niainako tamin'ity iray ity.
Radars NO Pro: Detector radar€ 3,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Traffic No!, Fampiharana iray hahafantarana ireo radara amoron-dalana
Juan Carlos Feito dia hoy izy:
Hitako fa milaza ilay rindranasa fa manana fomba maodely ……… saingy tsy hitako io safidy io na aiza na aiza. Azonao lazaina amiko ve hoe aiza izy?
Valiny tamin'i Juan Carlos Feito